पीसएलको अक्सन हुँदै, कतिमा बिक्लान् सन्दीप र सोमपाल ? [LIVE] - Everest Dainik - News from Nepal
पीसएलको अक्सन हुँदै, कतिमा बिक्लान् सन्दीप र सोमपाल ? [LIVE]
काठमाडौं, मंसिर ४ । पाकिस्तान सुपर लिग (पीसएल) को अक्सन सुरु भएको छ । अक्सन आज बेलुकादेखि सुरु भएको हो । नेपालबाट सन्दीप लामिछाने र सोमपाल कामी पीसएलको ड्राफ्टमा परेका छन् ।
पाकिस्तानको इस्लामाबादमा हुने अक्सनका लागि ड्राफ्टमा परेका सन्दीप गोल्ड विधामा परेका छन् भने सोमपाल सिल्भर विधामा छन् । विधा अनुसार सन्दीपलाई कुनै एक टिमले मात्र बोली लगाएमा ५० हजार अमेरिकी डलर पाउनेछन् ।
याे पनि पढ्नुस पोखरा प्रिमियर लिगः सन्दीपको टिमद्वारा काठमाडौंलाई १५० रनको लक्ष्य [LIVE]
यस्तै, सिल्भर विधामा रहेका सोमपालमाथि बोली लागेमा उनको न्यूनतम मूल्य २२ हजार डलर रहेको छ । पछिल्लो पटक एकपछि अर्को विदेशी लिगहरुमा व्यस्त सन्दीप यतिबेला दुबईमा हुने टी–१० क्रिकेट लिग खेल्न गएका छन् ।
ट्याग्स: Pakistan Super League Players Draft, sandeep lamichhane, sompal kami